MADAGASIKARA SY MARAOKA : Hiara-hiasa ho fanomezan-danja sy fikajiana ny tontolo iainana
Mitana anjara toerana lehibe amin’ny fampandrosoana ny firenena ny tontolo iainana. 24 janvier 2018
Manoloana izany indrindra dia mifototra amin’ izay lafiny fikajiana ny tontolo iainana izay ny fiaraha-miasa eo amin’i Mada gasikara sy ny fanjakana Maraokanina ankehitriny. Fantatra tao Antsa havola ny fiandohan’ny herinandro teo àry ireo asa hiarahan’ny firenena roa tonta miasa.
Nandritra izany no nandinihana izay sehatra hiasana. Nisy ihany koa ny fandinihana izay fandaniana rehetra tokony hatao hahatsara ny asa. Ary farany ny fijerena ny toerana rehetra hahafahana manao ny asa. Betsaka ireo sehatra isehoan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta saingy teboka efatra ihany no tena nasongadina. Tafiditra ao anatin’izany ny fitantanana ny fako eto Madagasikara. Teo ihany koa ny fifampizarana mahakasika ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny hetsika rehetra izay mety atao manoloana izany.
Voaresaka ihany koa ny lafiny fambolen-kazo sy ny fijerena ny lafin-javatra maro samihafa, toy ny sehatry ny angovo azo havaozina. Araka ny fantatra dia hisy ny fidinana ifotony hotanterahin’ireo delegasiona maraokanina tonga eto Madagasikara any amin’ireo faritra sasantsasany. Isan’izany ny eny Andralanitra sy ny any amin’iny lalam-pirenena fahaefatra mihazo an’i Mahajanga iny. Tanjona amin’ity farany ny hijerena izay azo hiaraha-miasa eo amin’ny lafiny fambolena sy ny fitantanana maro samihafa mahakasika ny tontolo iainana izany.
Miisa 12 ireo teboka hiarahana miasa
Tsara ho fantatra fa rehefa manana tontolo iainana madio ny olona dia manana fahasalamana tsara ary afaka miatrika amin’ny antsakany sy andavany ireo asa aman’andraikitra. Rehefa voahaja ihany koa ny tontolo iainana dia mihena ny mety hahatonga ny fiovaovan’ny toetr’andro. Miisa 12 ireo sehatr’asa narafitra iarahan’ny roa tonta miasa amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavana. Isan’izany ny fanadiovana ny rano maloto, ny fitantanana ireo faritra marefo, toy ireo faritra arovana sy ny sisin-tany.
Hiarahan’ny roa tonta miasa ihany koa ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fampandrosoana lovain-jafy eny ifotony. Tafiditra ao anatin’ireo teboka hifandrombonana ihany koa ny fitantanana ireo fako sy ny enti-manodina azy, araka ny efa voalaza eny ambony. Tsy nohadinoin’ny roa tonta ihany koa ny niresaka momba ny fambolen-kazo sy ny ady amin’ny hain-tany. Tokony hanatsara ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta araka izany izao fiaraha-miasa izao.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2462) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021